မြန်မာ - တရုတ်နယ်စပ် လမ်းကြောင်းမှ ဗန်းမော်၊ မိုးမောက်နှင့် ရွှေကူမြို့နယ်များသို့ တရုတ်ဘက် - Yangon Media Group
မိုးမောက်၊ သြဂုတ် ၁ဝ
မြန်မာ- တရုတ်နယ်စပ်လမ်းကြောင်း လွယ်ကျယ်မြို့မှတစ်ဆင့်ငှက်ပျောခြံသုံး မြေဆီဓာတ်မြေသြဇာအိတ်များ ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်၊ မိုးမောက် နှင့် ရွှေကူမြို့နယ်များသို့ တရုတ်ဘက်မှ အဝင်များလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါမြေဆီဓာတ်မြေသြဇာ အိတ်များကို ဗန်းမော်၊ မိုးမောက် နှင့်ရွှေကူမြို့များရှိ ငှက်ပျောခြံ များမှငှက်ပျောပင်များ စိုက်ပျိုးရာတွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
”အဓိကမိုးကာလမှာ အသုံးများတယ်လေ။ ကျန်ကာလကအဝင်မရှိဘူး။ ဒေသစိုက်ပျိုးရေးအတွက်သုံးတဲ့ မြေဆီအိတ်တွေပါ ငှက်ပျောခြံအတွက်ပဲသုံးတာ၊ တရုတ်နိုင်ငံကနေ ဂျူတီနဲ့တရား ဝင်တင်သွင်းတာပါ။ ဒီဗန်းမော် ဘက်သုံးတဲ့မြေဆီအားလုံးအမျိုးအစား ရှစ်မျိုးရှိပါတယ်” ဟု မြေ ဆီဓာတ်မြေသြဇာအိတ်များ သယ် ဆောင်ပို့ဆောင်နေသူ ကိုသား ငယ်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
အဆိုပါမြေသြဇာအိတ် တစ်အိတ်လျှင် တရုတ်ငွေ ၂ဝဝယွမ် ခန့်တရုတ်နိုင်ငံဘက်၌ ဝယ်ယူရ ကြောင်း မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် ဗန်းမော်မြို့အ ရောက်တစ်အိတ်ကျပ် ၆ဝဝ ရွှေကူမြို့အရောက် တစ်အိတ်ကျပ် ၁၂ဝဝရရှိကြောင်း ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထိပို့ဆောင်ပေးရပါက တစ် အိတ်ကျပ်၁၄ဝဝ ရရှိကာလွယ်ဂျယ်- ဗန်းမော်လမ်းကြောင်း၌ ယာဉ်တစ် စီးလျှင်အိတ် ၆ဝဝခန့်တင်ဆောင် သယ်ယူလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မုံရွာမြို့နယ် ဗောဓိတထောင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး အထူးစီမံကိန်း အတွက် ဘတ်ဂျက်ကျပ် သိန်း ၆ဝဝဝ ?
အချစ်ကို ရူးသွပ်တဲ့ သေရွာပြန် တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဗေလုဝ
ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းသည် လူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ် ငန်းဖော်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ် ဟုဆို
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူမားတြားကျွန်းတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အနည်းဆုံး ၁ဝ ဦးသေဆုံး၊ လူထောင်န
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက် သွန်းလောင်းသည့် ရွှေကြက်ယက် ညောင်ေ?
The Voice Myanmar မှ ပြိုင်ပွဲဝင် အဆို တော် Paul Austin နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း..။
အကျဉ်းကျခံ ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး လွတ်မြောက်ရေး နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ အသနားခံစာ ပေးပို့မည??